magnetic induction heater - induction kudziya muchina mugadziri | induction kudziyisa mhinduro
Magnetic Induction Heater michina yekushandisa inoshandiswa kunyungudutsa, kusunga, kusunga, chisungo, kupisa kupisa, kuomesa kana kupfava simbi kana zvimwe zvinhu zvinoitisa. Kune mazhinji emazuva ano maitiro ekugadzira, Magnetic induction Heating michina inopa inokwezva musanganiswa wekumhanya, kuenderana uye kutonga magnetic induction kupisa zvakanzwisiswa uye zvinoshandiswa pakugadzira kubva ku1920s. Munguva yeHondo Yenyika II, teknolojia yakakurumidza kugadzirisa nguva inoda nguva yehondo yezvinodiwa zvekutsanya, kutendeseka kunomesa midziyo injini yesimbi. Munguva pfupi yapfuura, kuisa pfungwa pahutano hwakakosha hwekugadzira uye kusimbiswa pakuvandudzwa kwehutano hwehutungamiri kwakakonzera kuwanikwa zvakare kwekombiyuta yekunyora, pamwe nekuvandudzirwa kwakanyatsogadziriswa, zvose zvakasimba zvine simba rekugovera simba.
Magnetic Induction Heater inovimba neakasarudzika maitiro eiyo induction kupisa radio frequency (RF) simba - iyo chikamu chemagetsi emagetsi epasi pazasi pe infrared uye microwave simba. Sezvo kupisa kuchichinjirwa kuchigadzirwa kuburikidza nemagetsi emagetsi, chikamu hachimbopinda chakanangana nechero murazvo, inductor pachayo haipisa, uye hapana kusvibiswa kwechigadzirwa. Kana yakanyatso kumisikidzwa, maitiro acho anodzokororwa uye kudzora.
1.IGBT module uye yakapfava switiching inverting matekinoroji ari mukugadzirwa kweiyo jenareta, kuvimbika kwepamusoro kunogona kuita.
2. Diki uye inotakurika, ichienzaniswa neSCR inodzorwa muchina chete 1/10 yekushanda nzvimbo inodiwa.
3. Kubudirira kwepamusoro kuchengetedza simba, kushanda kwepamusoro uye simba kure zvinogona kuchengetedzwa
4. Iyo jenareta inowoneka mune yakakura frequency renji kubva 1KHZ kusvika 1100KHZ, kuisirwa kunogona kuitwa nyore nyore zvinoenderana nebhuku redu rekushandisa.
5. 100% basa kutenderera, kuenderera kushanda kugona pane yakanyanya simba.
6. Simba rinogara riripo kana kugara uchidzora voltage modhi.
7.Kuratidzira kwesimba rekubuda, kubuda kwakawanda, uye kubuda kwemagetsi.
Categories Technologies Tags electrimagnetic of induction heat, magnetic brazing, magnetic Heater, magnetic heat treatment, magnetic induction brazing, magnetic induction heater, magnetic induction heat, magnetic induction heat machine, RF magnetic heat
Induction Inopisa Magnetic Iron Oxide
Induction Kuchenesa Magnetic Iron oxide mumvura yehyperthermia application
Chinangwa Kuchenesa magnetic iron oxide (Fe2O3) mumvura yehyperthermia application kuona curve yetembiricha vs. nguva panguva yekudziisa induction.
Chinyorwa Magnetic iron iron oxide mumvura (magnetic field iri 50-200kHz, 30kA / m), girazi vial
Zvishandiso • DW-UHF-4.5kW yekudziisa kupisa system, yakagadzirirwa neiri kure musoro webasa rine maviri 0.33μF ma capacitor ezere 0.66 μF
Maitiro A maviri anotenderera helical coil anoshandiswa kupisa girazi vial. Iyo tembiricha vs. nguva mhedzisiro ndeiyi:
• 66º - 107 ºF (19º - 42 ºC) mumasekonzi gumi
• 66º - 145 ºF (19º - 63 ºC) mumasekonzi gumi
• 66º - 170 ºF (19º - 77 ºC) mumasekonzi gumi
• Inokurumidza & yenzvimbo kudziyisa
• Uniform inodzora kupisa
• Chidiki chebhenji chepamusoro
Categories Technologies Tags Induction Kuchenesa Magnetic Iron, magnetic heat treatment, magnetic induction heater, magnetic induction heat